Ukukhethwa Kwemodeli - AOOD Technology Limited
Yini iringi eshelelayo?
Indandatho eshelelayo iyithuluzi elenziwa nge-elekthronikhi elihlanganiswa namabhulashi avumela ukuhanjiswa kwamandla nezimpawu zikagesi kusuka kokumile kuye esakhiweni esijikelezayo. Ebizwa nangokuthi i-rotary joint joint, collector noma i-swivel kagesi, i-slip ring ingasetshenziswa kunoma yiluphi uhlelo lwe-electromechanical oludinga ukujikeleza okungavinjelwe, okuphakathi noma okuqhubekayo ngenkathi kuthunyelwa amasiginali wamandla, we-analog, we-digital, noma we-RF kanye / noma idatha. Ingathuthukisa ukusebenza komshini, yenze lula ukusebenza kohlelo futhi iqede izintambo ezenzakalayo ezilalenge ezihlangwini ezihambayo.
Ngenkathi inhlosongqangi yeringi eshelelayo ukudlulisa amandla nezimpawu zikagesi, ubukhulu bomzimba, imvelo yokusebenza, isivinini esijikelezayo nezithiyo zomnotho kuvame ukuthinta uhlobo lokupakisha okufanele kusetshenziswe.
Izidingo zamakhasimende nezinhloso zezindleko yizinto ezibucayi ekushayeleni izinqumo eziholela ekwakhiweni komklamo oyimpumelelo wesiliphu. Izinto ezine ezibalulekile yilezi:
■ Ukucaciswa kukagesi
■ ukupakisha ngomshini
Izindandatho ezishelelayo zisetshenziselwa ukudlulisa amandla, i-analog, amasiginali we-RF nedatha ngeyunithi ejikelezayo. Inani lamasekethe, izinhlobo zamasiginali, kanye nezidingo zokungavikeleki komsindo kagesi kohlelo kudlala indima ebalulekile ekunqumeni izingqinamba zokwakhiwa komzimba ezibekwe ekwakhiweni kwendandatho eshelelayo. Amasekhethi wamandla aphezulu, ngokwesibonelo, adinga izindlela ezinkulu zokuhambisa kanye nesikhala esikhulu phakathi kwezindlela ukukhulisa amandla we-dielectric. Imijikelezo ye-Analog nedatha, ngenkathi inciphile ngokomzimba kunamasekethe kagesi, nayo idinga ukunakekelwa ekwakhiweni kwayo ukunciphisa imiphumela yokuxoxa noma ukuphazamiseka phakathi kwezindlela zesiginali. Ngejubane eliphansi, izinhlelo zokusebenza zamanje eziphansi uhlelo lokuxhumana ngegolide-on-gold lungasetshenziswa. Le nhlanganisela ikhiqiza ukucushwa okuncane kakhulu kokukhonjiswa njengoba kukhonjisiwe kumasongo we-AOOD compact capsule slip. Ngezidingo ezisezingeni eliphakeme nezamanje ukufakwa kwamabhulashi we-graphite esiliva ahlanganisiwe namasongo esiliva. Le mihlangano ivame ukudinga osayizi abakhulu bephakeji futhi iboniswa ngaphansi kwamasongo wokubhola. Kusetshenziswa noma iyiphi indlela amasekhethi wamasilayidi akhombisa ushintsho ekumelaneni kokuxhumana okunamandla cishe kwama-milliohms ayi-10.
Ukucatshangelwa kokupakisha ekwakhiweni kwendandatho eshelelayo kaningi akulona eliqondile njengezidingo zikagesi. Imiklamo eminingi yama-slip ring idinga ukufakwa kwekhebula nokufakwa komshini noma imidiya ukuze kudlule iringi. Lezi zidingo zivame ukucacisa ubukhulu beyunithi elingaphakathi lobubanzi. I-AOOD inikela ngezinhlobonhlobo zemihlangano yezindandatho zokubhola. Eminye imiklamo idinga ukuthi iringi eshelelayo ibe yincane ngokwedlulele ukusuka kububanzi bokuma, noma ukusuka endaweni yokubuka yokuphakama. Kwezinye izimo, isikhala esitholakalayo se-slip ring silinganiselwe, esidinga ukuthi izingxenye zesilayidi zihlinzekwe njengezihlukile, noma ukuthi iringi yesiliphu ihlanganiswe nemoto, inzwa yesikhundla, i-fiber optic rotary joint noma i-RF rotary ngokuhlanganyela kwiphakethe elihlanganisiwe . Ngokuya ngobuchwepheshe besilayidi obuyinkimbinkimbi, i-AOOD inika amandla zonke lezi zidingo eziyinkimbinkimbi kungahlangatshezwa nazo ohlelweni olulodwa oluphelele lwendandatho eshelelayo.
Imvelo okudingeka ukuthi isiliphu sisebenze ngaphansi kwayo inethonya ekwakhiweni kwezindandatho ngezindlela eziningi. Ijubane lokujikeleza, izinga lokushisa, ingcindezi, umswakama, ukushaqeka nokudlidliziza nokuchayeka ezintweni ezonakalisayo kunomthelela ekukhetheni okuphethe, ukukhethwa kwangaphandle kwempahla, izintaba ze-flange ngisho nokukhethwa kwekhebula. Njengomkhuba ojwayelekile, i-AOOD isebenzisa izindlu ezingasindi ze-aluminium ngendandatho yayo eshibhile. Izindlu zensimbi engenasici zinzima, kepha ziyadingeka olwandle, ngaphansi kwamanzi, olonakalisayo kanye neminye imvelo enokhahlo.
Ungayicacisa Kanjani i-Slip Ring
Izindandatho ze-Slip zihlala ziyingxenye yendlela enkulu enesidingo sokudlulisa amandla kagesi athile namasekhethi wesiginali endaweni ejikelezayo. Umshini iringi eshelelayo iyingxenye yokusebenza endaweni enjengendiza noma uhlelo lwe-antenna ye-radar. Ngakho-ke, ukwakha idizayini yesilayidi ezophumelela ekusetshenzisweni kwayo izindlela ezintathu kufanele zaneliswe:
1. Ubukhulu bomzimba, kufaka phakathi ukuhleleka kokunamathiselwe nezici zokususa-shintsha
2. Incazelo yamasekethe adingekayo, kufaka phakathi ubukhulu bamanje namandla kagesi
3. Indawo yokusebenza, kufaka phakathi izinga lokushisa, umswakama, izidingo zenkungu kasawoti, ukushaqeka, ukudlidliza
Izidingo zezindandatho ezinemininingwane eminingi zifaka:
■ Ukumelana okukhulu phakathi kwe-rotor ne-stator
■ Ukuhlukaniswa phakathi kwamasekethe
■ Ukuhlukaniswa nemithombo ye-EMI ngaphandle kwezindlu zesiliphu
■ Ukuqala nokusebenzisa i-torque
■ Izincazelo zesekethe yedatha
Izici ezingeziwe ezijwayelekile ezingafakwa emhlanganweni wesilayidi zifaka:
■ Isifaki khodi
■ Izinyunyana ezijikelezayo zamanzi
■ Izinyunyana ezijikelezayo ze-Coax
■ Amalunga we-fiber optic rotary
I-AOOD izokusiza ukuthi ucacise isidingo sakho sesiliphu bese ukhetha imodeli efanelekile yezidingo zakho zedizayini.